ရေးသားသူ poemflower at Thursday, August 06, 2009
မိုးစက်အိမ် August 7, 2009 at 12:03 AM
လောက၌ အကောင်းဆုံးသော အလုပ်တစ်ခုမှာ စိတ်ပျက်အားလျော့ နေသူများအား စိတ်ပျော်အားတက် နေသူတို့က စိတ်ပျော်ခြင်း ၊ အားတက်ခြင်း မကူးစက် ကူးစက်အောင် ပြုလုပ်ပေးခြင်းပင်ဖြစ်သည်။....
အလွန် မှန်တဲ. စကားစုလေးပါ ဗျာ...လုပ်ဆောင်သင်.
တဲ. အရာလေးပါ ...
kokomaung.uk August 7, 2009 at 12:39 AM
စိတ်ပျက်အားငယ်နေချိန်မှာ သူများဆီက အပျော်တွေ ယုံကြည်မှုတွေ အမြန်ဆုံးကူးစက်လာပါစေလို့ မျှော်လင့်နေမိတာ အတော်လေးကြာပါပြီ။ ဒီပို့စ်လေးပြန်ဖတ်မိမှ ကိုယ့်လိုလူ အများကြီးရှိလောက်တယ်လို့ သဘောပေါက်မိတယ်။
အရုပ်ကလေး August 7, 2009 at 6:01 PM
လူသားတွေရဲ့ စိတ်အသိကိုက အခန်းတံခါးဝမှာ စောင့်နေခြင်းပဲ .. အဲတော့ ၀င်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်မှတော့
ကူးစက်ခြင်းကလည်း ဖြစ်တည်တာပေ့ါ ..။
စာနာဖေးမမှုတွေနဲ့ လူ့ဘ၀ရဲ့ တစိတ်တဒေသလေးမှာ
ဆုံဆည်းမှုတွေနဲ့ ပျော်ရွှင်မှုတွေ ဖလှယ်နိုင်သော အဖေါ်မွန်ကောင်းများ ဖြစ်ပါစေလို့ တောင်းဆုပြုသွားပါတယ် ..။
littlecandle August 8, 2009 at 8:18 PM
စိတ်ပျက်အားငယ်တဲ့ အခါ ဒီဘလော့လေးကို နောက်တစ်ခေါက်လာဖတ်ဦးမယ်ဗျာ။
`စိတ်ပျက်နေသူ၏ ဒုက္ခတို့ကို သနားကြင်နာစွာ နားထောင်၍ အနာဂတ်အတွက် မည်မျှ မျှော်လင့်ချက်ရှိသည်ကို ပြောဆိုအားပေးခြင်းသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်..´ ကိုယ်တိုင် အပါအ၀င် အခြားသူတွေ အကျိုးစီးပွားအတွက် မှတ်သားသင့်တာ လေးတွေ ဖတ်ရှုခွင့် ရတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ချမ်းမြေ့ပါစေ။ လေးစားလျက်..